Apple Pay hanomboka any Israel amin'ny 5 Mey | Avy amin'ny mac aho
Apple Pay dia hanomboka any Israel amin'ny 5 Mey
Toa izany ihany tamin'ny farany voamarina fa ny firenena manaraka izay manana ny mpampiasa mampiasa ny Apple Pay amin'ny alàlan'ny iPhone, iPad ary iPod touch dia i Israel. Tamin'ny herinandro lasa teo dia namoaka lahatsoratra iray izahay izay nanoroanay anao ny mety hanombohana an'ity teknolojia fandoavam-bola ity any Israel.
Ity tsaho ity dia nohamafisin'i Haaretz, serivisy fandoavam-bola tsy misy fifandraisana izay nanamafy fa amin'ny 5 Mey, ireo mpampiasa fitaovana mifanaraka amin'ny Apple Pay dia afaka manomboka manampy ny carte de crédit sy debit ao aminy amin'ny rindrambaiko Wallet.
Ny anjaran'ny tsenan'ny iPhone ao Israel eo anelanelan'ny 20 sy 30%Noho izany, ny fampidirana Apple Pay eto amin'ity firenena ity dia tsy haneho fiovana lehibe eo amin'ny tontolon'ny ankehitriny. Ny komisiona tazomin'i Apple amin'ny raharaham-barotra tsirairay ataon'ny mpampiasa dia miovaova arakaraka ny banky, fa ny salan'isa dia 0,05%.
Tsy toy ny fandefasana any amin'ny firenena hafa, Apple Pay dia hifanaraka amin'ny ankamaroan'ny banky sy ny orinasa banky Ao amin'ny firenena, amin'ity fomba ity, Apple dia manome antoka fa ny ankamaroan'ny mpampiasa azy dia afaka mampiasa azy io ary lasa safidy fandoavam-bola tiany io.
Ny vaovao voalohany mifandraika amin'ny fanombohana ny Apple Pay any Israel dia nanomboka tamin'ny faran'ny taona lasa. Ny antony nahatonga ny fahatarana tamin'ny fanombohana dia noho ny fisian'ny orinasa marobe izay tsy natao hampiditra an'ity haitao ity amin'ny orinasan-dry zareo, eritreritra fa soa ihany fa niova.
Apple Pay dia misy any amin'ny firenena 50 maherySaingy, amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika raha ny drafitra fanitarana dia tokony hanitatra io isa io amin'ny alàlan'ny fampidirana firenena miteny espaniola bebe kokoa, any Mexico sy Espana ihany no ahitantsika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple Pay dia hanomboka any Israel amin'ny 5 Mey
Ankoatry ny premiere an'ny andiany Mosquito Coast, Apple dia namoaka manokana ambadiky ny sehatra
Mpanjifa vaovao tonga ao amin'ny Apple miaraka amin'ny Macs sy iPads